राम्रोसँग बुझेर मात्र विदेश पढ्न जानुस् : कृष्ण आचार्य (अन्तर्वार्ता) – Lokpati.com
नेपाल प्रहरी अमेरिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अपराध मृत्यु पक्राउ प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस सरकार प्रधानमन्त्री चितवन केपी शर्मा ओली राशिफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
By लाेकपाटी न्यूज	 Last updated May 10, 2019
पछिल्लो समय विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुका लागि जापान र अष्ट्रेलिया प्रमूख गन्तव्य बनेका छन्। विशेष गरी तिनै देशका राम्रो–राम्रो कलेजसँग सम्झौता गरी विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि उपयुक्त परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीका रुपमा परिचित भएको छ ग्लोबल मुन कन्सल्टेन्सी पनि।
उक्त कन्सल्टेन्सी विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित छ। पुतलीसडकको शंकरदेव क्याम्पसअगाडि अवस्थित यस कन्सल्टेन्सीले विशेषतः अष्ट्रेलिया, जापान र यूरोपका केही शहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई पठाउँदै आएको प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण आचार्य बताउँछन्। लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका आचार्यले आफ्नो कन्सल्टेन्सीले एब्रोड स्टडीका सम्बन्धमा परामर्श दिँदै आएको बताएका छन्।
बाग्लुङ स्थायी घर भएका आचार्यले पोखरामा रहेर पन्ध्र वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरे। त्यो सँगसँगै उनले त्यहाँका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा शैक्षिक परामर्शदाता भएर पनि काम गरे। त्यही अनुभवको जगमा टेकेर अहिले उनी काठमाडौंमा ग्लोबल मुन कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्।
त्यही कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण आचार्यसँग ग्लोबल मुन कन्सल्टेन्सी, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको अवस्था, अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया, विद्यार्थी भिजा लगायतको सेरोफेरोमा रहेर लोकपाटी डटकमकी न्यूज डेस्क प्रमूख मधुरीमा पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक।
कन्सल्टेन्सी कहिलेदेखि सञ्चालन गर्नुभयो, कस्तो चल्दैछ अहिले ? संक्षिप्तमा बताइदिनुस् न।
म विगत पाँच वर्षदेखि कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। आफ्नै लगानीमा ग्लोबल मुन कन्सलटेन्सी सुरुवात गरेको भने तीन वर्ष भयो। मैले योभन्दा अघि पोखरामा विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा शैक्षिक परामर्शदाताको रुपमा काम गरेँ। आफ्नै लगानीमा कन्सल्टेन्सी सुरुवात गर्नुको उद्देश्य भनेको नेपालका विद्यार्थीहरुले विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा चाहेको विषयमा अध्ययन गर्न जाने वातावरणको सिर्जना गर्ने हो।
हामीले विद्यार्थीको एकेडेमिक क्वालिफिकेशन बढाउनै भनेर चाहिँ पठाउँदैनौं। किनभने नेपालको सन्दर्भमा कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता बढाउने भन्दा पनि कमाउनका लागि विदेश अध्ययन रोज्ने गरेको पनि पाइन्छ। विविध कारणले गर्दा अहिलेका हरेक विद्यार्थीमा अध्ययनका लागि बाहिर जाने चाह बढ्दै गएको पाइन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालका अधिकांश विद्यार्थीहरु पढाइलाई बहाना बनाएर कमाउन विदेश गइरहेका छन्। आफ्नो जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि विद्यार्थीहरु विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
तपाईहरुको कन्सल्टेन्सीले कुन–कुन भिसामा नेपालीहरुलाई कहाँ–कहाँ पठाउने गरेको छ ?
कुन–कुन भिजामा भन्दा पनि हामीले विद्यार्थी विदेश पठाउने भनेकै स्टुडेन्ड भिजामा हो। सोध्न, बुझ्न आउने सबैलाई शैक्षिक परामर्श लगायतका सबै किसिमका परामर्श भने कन्सल्टेन्सीबाट दिने गरेका छौं। हाम्रो मूख्य उद्देश्य भनेको विदेश पठाउने भन्दा पनि बुझ्न आएकालाई राम्ररी परामर्श दिनु हो। विद्यार्थीले जान चाहेको ठाउँका कलेजहरु कस्ता छन्, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यहाँका कठिनता र सहजता के–के छन्, त्यहाँको पढाइ सँगसँगै देशको बारेमा धेरै कुराहरुको बारेमा सिकाउने, परामर्श दिनेजस्ता काम हाम्रो कन्सल्टेन्सीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्।
कहाँ–कहाँ पठाउने भन्ने सन्दर्भमा आजभोलिका युवाहरुको प्रमूख रोजाइ अष्ट्रेलिया भएको छ। त्यसपछि जापान र युरोपका विभिन्न शहरहरु रोजाइमा परेका छन्। हाम्रो कन्सल्टेन्सीले चाहिँ विशेष गरी शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा जापान र अष्ट्रेलियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।
एक जना नेपाली विद्यार्थी भिसामा विदेश जान के–के कुरामा योग्य हुनुपर्छ ?
पहिलो कुरा विदेश अध्ययनमा जान जाने विद्यार्थीको १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। एन्टरमिडिएट वा प्लस टु लेबल अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्‍यो। वैदेशिक अध्ययनमा जापान पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ७ देखि १० लाखसम्म एक वर्षको शूल्क लाग्छ। यस्तै अष्ट्रेलिया र अमेरिका जान वार्षिक १२ देखि ३० लाख लाग्छ। हामीले यहाँबाट विद्यार्थीको एक वर्षको पढाइ शूल्क तिरेर पठाउने हो। त्यसकारण उसको त्यो शूल्क तिर्न योग्य अभिभावक हुनुपर्छ। हामीले विद्यार्थीको दक्षता र चाहना अनुरुपको कलेजमा एप्लाई गर्दिन्छौं। त्यसपछि अन्तर्वार्ता हुन्छ। अन्तर्वार्तामा छनोट हुने विद्यार्थी जान पाउँछ।
विद्यार्थी भिसामा एउटा विद्यार्थी विदेश जान कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ? विदेश जान चाहने विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु हुन्छ कि ?
मूख्य कुरा भनेको भिसा लागिसकेपछि कुन सिटीको कुन कलेजमा जाँदैछ, त्यहाँको बारेमा उनीहरुलाई पढाउनुपर्‍यो। हामीले विद्यार्थी जान चाहेको कलेजका नियम, कानून र अनुशासनका बारेमा परामर्श दिन्छौं। त्यसपछि विद्यार्थी जाने कलेज कुन हो, त्यो कलेजको कुनै एक जनासँग सम्पर्क गराइदिन्छौं र उहाँकै माध्यमबाट हामीले यहाँबाट टिकट काटेर पठाइदिन्छौं।
विदेश गएपछि विद्यार्थीले त्यहाँको के–के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, कानूनी प्रक्रिया के हुन्छ ?
कानूनी प्रक्रिया बुझन त जरुरी छँदैछ। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको चाहिँ म कुन कलेजमा पढ्न जाँदैछु, त्यो कलेज स्थापना कहिलेबाट भएको हो, दर्ता भएको कलेज हो कि होइन, सरकारले स्वीकृति दिएको छ कि छैन ? लगायतका कुराहरु हुन्। अर्को कुरा भनेको नेपालको सरकारमा एनओसी गराएर जानुपर्‍यो। राज्यले त दर्ताविहीन कलेज भए त एनओसी दिँदैन। यसरी प्रक्रियागत हिसाबले गयो भने विद्यार्थी ठगिनबाट बच्छ। त्यसैले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले यस्ता कानूनी प्रक्रिया बुझ्न जरुरी छ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेहरु ठगिएको, अलपत्र परेको, कागजात नक्कली परेकोजस्ता समाचारहरु आइरहेका छन्, यस्तो किन हुन्छ ?
नक्कली कागजात हाम्रो कन्सल्टेन्सीले बनाउने भन्ने कुरै हुँदैन। तर, कुनै विद्यार्थीले आफ्नो मार्कसिट सक्कली हो भनेर ल्यायो भने हामीले डकुमेन्टेशन गरेर एप्लाई गर्दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग त्यो विद्यार्थीको मार्कसिट सक्कली वा नक्कली भनेर जाँच्ने मेसिन छैन। त्यसकारण यदि भोलि नक्कली मार्कसिट त्यो विद्यार्थीले ल्याएको रहेछ भने त्यसको जवाफदेही त्यही विद्यार्थी हुनुपर्छ। हामीले त सबै कुरा सोधेर नै एप्लाई गर्दिने हो। विद्यार्थीले सही नबताउनु भनेको उसैको गल्ती हो।
धेरै कन्सल्टेन्सीको भीडमा कुनै–कुनै कन्सल्टेन्सीले बदमासी पनि गरेका होलान्, छैनन् भन्न सकिँदैन। तर, विद्यार्थी स्वयंलाई त म योग्य छु, छैन, मेरो मार्कसिट सक्कली हो, हैन त थाहा हुन्छ, त्यो चाहिँ विद्यार्थीले ढाँटेन भने ऊ ठगिनबाट बच्छ। त्यसकारण यस्तो कुरामा विद्यार्थी स्वयम् सचेत हुनुपर्छ ।
दक्ष र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन गराउने पेशा रोजेर गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन, के लाग्छ यहाँलाई ?
हामीले विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा पढ्न भनेर राम्रो राम्रो कलेज पढ्न पठाउने हो। तर, हाम्रो देशको बाध्यता कस्तो छ भने, यहाँ उनीहरुलाई १८ घण्टा काम गरेर पनि पेट पाल्न गाह्रो छ, बाहिर गइसकेपछि कलेजको बाँकी रहेको समयमा काम गरेर पनि राम्रै आयआर्जन गरिरहेका छन्। सायद त्यही कारणले पनि विद्यार्थीहरु बाहिर गइरहेका छन्। हामीले त गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरुन् र देशमा आएर केही गरुन् भनेर पठाउने हो।
तर, उल्टो के भयो भने पढ्न भनेर गएका अधिकांश विद्यार्थी नेपाल फर्केर आउन रुचाएनन्। यसको कारण भनेको यहाँको सरकार नै हो। किनभने नेपाल सरकारले त्यस्ता दक्षता हासिल गरेको विद्यार्थीका लागि यहाँ प्लाटफर्म निर्माण गर्न सकेको छैन। कतिपय विद्यार्थी त फर्केर आएका पनि छन्। जो आएका छन्, तिनीहरुले धेरै प्रगति गरिराखेको स्थिति पनि छ। त्यसकारण तिनीहरुलाई कसरी फर्काउने भन्ने बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
अर्को कुरा विदेश पढ्न भनेर जानेहरुमा शतप्रतिशत त नभनौं ९९ प्रतिशत पढाइमा नै लाग्छन्। किनभने त्यहाँ कलेज अनिवार्य गएन भने उनीहरुहरु कानूनी हिसाबले त्यहाँ बस्न नपाउने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण कलेज अनिवार्य नै जान्छन्, बरु गएकोमध्ये सबै दक्ष भएरै आउँछन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। शतप्रतिशत नै कलेज जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन किनभने एक दुई प्रतिशत विद्यार्थी भाग्ने, नपढ्ने अथवा भागेर काम गर्नेतर्फ पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ।
विद्यार्थीले अरु कन्सल्टेन्सी छोडेर ग्लोबल मुन नै किन रोज्ने ? अरुभन्दा यहाँको कन्सल्टेन्सीमा के छ फरक विशेषता र सुविधा ?
हामीले ८–१० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी र दक्ष एजेन्टहरु जापान, अष्ट्रेलियामा लगाइरहेको छौं। राम्रो–राम्रो कलेजहरुसँग सम्झौता गरिरहेका छौं। हामीले विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि मात्र पठाउने भन्दा पनि पेशागत परामर्श सम्बन्धमा अरुले भन्दा बुझाएर पठाउने गरेका छौं। जस्तो कुनै विद्यार्थीको नाम निस्कियो भने उसलाई त्यहाँ गएर सुरुमै कसरी सेटल हुन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श दिएर मात्र पठाउँछौं।
अन्य कन्सल्टेन्सीभन्दा अलिक नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अर्को कुरा, हामीले विद्यार्थी जान चाहेको देश, कलेज, पढ्न चाहेको विषयको बारेमा सोध्छौं र उसको सबै कुरा अध्ययन गरेर सकेसम्म आफ्नो विषयमा नै अध्ययनका लागि जान सुझाव दिन्छौं। अन्य विषयमा जान चाहन्छ भने पनि हामीले आवश्यक परामर्शसहित सहजता प्रदान गर्ने गर्छौं।
विदेश पढ्न जानेहरुका लागि अष्ट्रेलिया नै पहिलो रोजाइमा पर्नुको कारण ?
पहिलो कुरा त त्यहाँको हावापानी हो। सँगसँगै धेरै नेपालीहरु अहिले अष्ट्रेलियामा छन्। अष्ट्रेलियाका कलेजहरुमा विद्यार्थीले रोजेका विषयहरु पढ्न पाउँछन्। काम गर्न र आय आर्जनका लागि पनि सजिलो छ अष्ट्रेलिया। यस्तै विभिन्न कारणले गर्दा विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया रोज्ने गरेको पाइन्छ।
अन्त्यमा, विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई हाम्रो अनलाइनमार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त विदेश पढ्नभन्दा पनि घुम्न जानुहोस् भन्छु। त्यहाँ जानेहरुले पनि सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग नेपालमै गर्नुस् भन्न चाहन्छु। विदेश नै पढ्न जान्छु भन्नेहरुलाई पनि राम्रोसँग बुझेर जान आग्रह गर्छु।
अन्तर्वार्ताकृष्ण आचार्यग्लोबल मुन कन्सल्टेन्सीविदेश
जेलभित्रै युवक झुण्डिएपछि चितवन तनावग्रस्त
विप्लवका युवा संगठनका जिल्ला अध्यक्ष पक्राउ
बेपत्ताको विस्तृत छानबिन रोल्पाबाट शुरु
चेल्सीमाथि वायर्नको फराकिलो जित